Ahịa Mango - The isi uwe ị chọrọ n'oge a | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 10:00 | Kedu ihe m ga-eyi
na Ire ahia mango Ha na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị ma ugbu a ị nwere ike ịhụ ego dị ịtụnanya n'ezie. Ọ bụ ya mere na ị gaghị atụfu ohere iji kporie ndụ nke ọ bụla n'ime uwe ndị anyị họọrọ maka gị. Ebe ọ bụ na ị ga-achọ ha na ụbọchị gị n'ihi na ha bụ n'ezie isi.
Na mgbakwunye na nke a, ị maraworị na ịre ahịa bụ oge kwesịrị ekwesị iji nweta ụfọdụ ihe ọhụrụ ị nwere ike iyi ruo ọtụtụ ọnwa. Uwe eji arụ ọrụ na ị ga-ahụkwa na nhọrọ na-esonụ. Ị chọrọ ịma ihe ọ bụ? Jiri nlezianya mara nke ọ bụla n'ime ha ka ị nwee mmasị na ụdị kachasị mma nke oge a!
1 Ọkpụkpọ ire ere mango na cardigans
2 Uwe na-ere ere
3 Uwe ma ọ bụ sket?
4 Denim uwe ogologo ọkpa na uwe elu
Ọkpụkpọ ire ere mango na cardigans
Ejuju ire mango bịarutere echiche mara mma n'ihe gbasara sweaters na cardigans kwa. Ọ bụ ya mere na nke mbụ, anyị ga-ahụ uwe sara mbara, dịka iwu n'ozuzu, nke ga-enye anyị nkasi obi maka ụbọchị ọ bụla. Ma nke ahụ abụghị ihe niile, n'ihi na n'otu aka ahụ nnukwu ihe ndị bụ isi ga-adị mgbe niile n'akụkụ anyị ma na mgbakwunye na ha, nkọwa ndị dị ka rhinestones, embroidery ma ọ bụ stampụ necklines achọghị ka uche parade. Ọ bụ ya mere ị ga-eji họrọ ụdị dịgasị iche iche na ọnụ ala dị ala karịa ka ị chere.
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-eyi jaket, ị na-enwe mgbe niile nhọrọ na ndị ọzọ na ike. N'ihi na ha na-egosi na obosara imecha na-ahapụ anyị mfe nke jikọta ha na t-shirts ribbed ma ọ bụ sweaters n'okpuru ha. Ugbu a bụ oge ịhọrọ uwe dị nro na nke dị mfe, na nnukwu bọtịnụ iji nye uwe ahụ karịa àgwà, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Agba na-anọpụ iche ma ọ bụ nke bụ isi ga-abụ ndị na-akwado ya ruo mgbe ebighị ebi.
Uwe na-ere ere
N'ezie maka oge a otu n'ime uwe ndị kachasị ewu ewu na-adaba na uwe mkpuchi. N'ihi na ha bụ ndị na-ekwe ka anyị na-enwekwu ahụ iru ala na n'ezie, mgbe nile pụọ na oyi. Ya mere, n'otu aka anyị napụtara ihe karịrị echiche zuru oke n'etiti ahịa Mango na nke ahụ bụ na ọ bụ uwe na-atụgharị. Ya mere, anyị nwere a abụọ maka otu na anyị hụrụ n'anya na: N'otu aka ahụ, a akpụkpọ mmetụta mgbe na nke ọzọ, ọ ga-abụ ntutu na-eme ka anyị na-ekpo ọkụ.
Ma ọ bụrụ na-amasị gị uwe mkpuchi Ha anaghị apụ apụ dị ka ajị anụ na ara abuo abuo, I na chioma. Ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ achọpụtala ha. N'ihi na ha bụ ndị bụ isi na nke anyị nwere ike ịmepụta dị iche iche emecha na style. Site na ndị na-ejikọta ya na jeans dị ka ndị ọzọ ọkara-formal na uwe ogologo ọkpa. Ọ dịzịrị gị!
Uwe ma ọ bụ sket?
Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịhọrọ, mgbe ahụ ọ kacha mma ịhọrọ ha abụọ. N'ihi na n'otu aka Uwe midi na ribbed na-abụkarị otu n'ime nnukwu isi nri. Nke mere na ị nwere ike iso ha na uwe mwụda, eriri sara mbara ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ bụla iji nye ha niile aha. N'aka nke ọzọ, uwe mwụda ogologo ikpere nwere mbipụta na agba ndị bụ isi bụkwa ụzọ kachasị mma isi tinye ejiji na ndụ anyị kwa ụbọchị.
Denim uwe ogologo ọkpa na uwe elu
Ụdị ehi ahụ enweghị ike ịpụ n'etiti uwe ndị a na-ere ere. na Mango. Ma na nke a, anyị chọrọ iji bib mee ka ha pụta ìhè. N'ihi na ọ bụ mgbe niile uwe ọzọ na-enye nkasi obi dị ukwuu ma dị ka ndị dị otú ahụ, ha kwesịrị ịdị na ndụ anyị. Ugbu a, ogologo ogologo ọkpa na akwa akwa adịghị anya n'azụ. N’ihi na anyị nwere ike igosi ha ọrụ ma ọ bụ ná nzukọ ndị ahụ dị mkpa. Ka o sina dị, ha na-echere gị na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Uwe ndị bụ isi nke ị ga-ahụ na ahịa Mango